7 Mejores apps para ligar en Android que dan resultados | Android Guías
Ezona 7 zintle zokusebenza ukuthandana kwi Android
UManuel Ramirez | 11/05/2020 09:55 | Ukuhlaziywa ukuba 21/06/2021 13:55 | IiApple zeApple
Nge ezona zilungileyo zokuthandana zokusebenza onazo kwi-Android Uya kuba nethuba lokudibana nalo mntu uqhelekileyo, loo mhlobo ukudibana naye amaxesha ngamaxesha okanye nalo mfazi onokuba ngumama wabantwana bakho.
Siza kuthetha ngezona zicelo zibalaseleyo sinazo namhlanje kwifowuni ephathekayo eziye zaguqula indlela dibana nabantu abatsha. Ngokukodwa kwihlabathi apho ii-smartphones zikwazile ukunciphisa umgama kunye nokukwazi ukuvula isangqa sonxibelelwano; ngakumbi abo sinokuthi sibe nesiphelo kunye nabo ukuba bayinyani kwaye bayinyani kwinto abayithethayo. Ziphose kuyo.
1.1 Icandelo lokudibanisa lokurhuma
2.1 Ukupasa intlawulo kaMeetic
3.1 Ukubhaliselwa kweLOVOO
7.1 UGrindr kunye neXTRA yakhe
Siqala nge I-app kaKumkanikazi yokuthandana kweesoftware. I-Tinder ikhethwe ngabaninzi kangangeminyaka ukuba ibe nelona nani liphezulu labasebenzisi kunye naloo nto idume ngayo: izijekulo "Ndithanda le" okanye "Andiyithandi le."
Kufuneka ikhankanyiwe ukuba iapp nganye inabaphulaphuli bayo, kwaye inyani kukuba, phantsi kwamava okusebenzisa ezininzi, unokufumana abantu ngokuhambelana nezinto esizithandayo. Konke kuxhomekeke kwinto esiyikhangelayo, kwaye masibe serious, uninzi lwabantu abasebenzisa eziapps zihlala ziyinto eqhelekileyo ngaphandle kokuzibophelela ekuqaleni.
Enye yeengxaki zeziapps ziiprofayile ezingezizo. Ukuba uza kuhlawula kwaye ujonge umntu onobuzaza, ungakhathazeki malunga neefoto ezingacacanga okanye iiprofayili ezingaqhelekanga. Nabani na okhangela into enzulu, nangayiphi na injongo, uya kuhlala ecacile ngayo yonke into, ke themba ukuba uphambi kwabantu bokwenyani, kuba zikhona. Kufuneka ube nomonde omncinci.
Kuzo zonke sinokuphantse sitsho Ingxangxasi yeyona ine «abaphulaphuli abaphucukileyo». Masithi iqonga lakho liyanceda ekufumaneni abantu abazimiseleyo kwinto abayithethayo, nangona kule bekukho into ethi "Ndithi ndingugqirha ukuze ndibonakale ndipholile" ukuze kamva kubuye kubekho ubuxoki obuninzi. Ewe kunjalo, lungiselela ifoto elungileyo yeprofayile yakho ukuze ibambe umdla.
Icandelo lokudibanisa lokurhuma
Into esiyicebisa ngeTinder yile zama inguqulelo yasimahla kwaye iza nenani eliphezulu lokuthandwayo ngosuku. Oko kukuthi, uya kuba nenani eliqingqiweyo lokuthinta kude ufike kwixesha ongenakuqhubeka nokuhlola phakathi kwamawaka wabasebenzisi abasebenzisa le app. Emva kokusebenzisa uhlobo lwasimahla, sicebisa ingxelo yeprimiyamu kuba uya kuba nokuthanda okungapheliyo kunye ne-5 "super stars" ukwenzela ukuba umntu oyifumeneyo abe nesaziso kwibha yomgangatho weselfowuni yakhe.
Oko kukuthi, ukuba uyayithanda intombazana okanye inkwenkwe kakhulu, ukubanika i-superstar, baya kwazi ewe okanye ewe. Nangona kuxhomekeke kubo ukuba bafuna ukuqala incoko. Eli linqaku leprimiyamu yesicelo exhomekeke kwindawo ukufumana abantu abathanda izinto.
Oko kwathethi ngendawo, ukuqaqambisa kweTinder yinto enokwenzeka ukusuka kubhaliso lweprimiyamu ye- ukwazi ukutshintsha indawo okuyo Ukuze, ukuba uya eholideyini, ungakhangela abantu abaza kuqhubeka neengxoxo kwaye uhlale ngezo ntsuku.
Enye into enomdla yokubhaliselwa yile Ukunyusa simahla veki nganye kwaye iyakuvumela ukuba uvele imizuzu engama-30 kwindawo yakho kuye wonke umntu. Ukuba sithathe ithuba lokuKhuthaza ngolwesiHlanu emva kwemini, ngokuqinisekileyo siya kuyifumana iligi.
Sicebisa ukuba uthathe ithuba lokunyusa ngeCawa, kuba lolona suku ludlamkileyo. Uya kuzibuza isizathu sayo kwaye ayikho enye ngaphandle IiCawe yile "yosuku emva" kokuhlangana nomntu kwaye khange uve ukuba "uziva", ke usuku olulandelayo lulungile ukuqala enye i-adventure yengxoxo ukuze ukwazi ukuyipheka yonke iveki kude kube sekupheleni kosuku olulandelayo.
I-Tinder Gold ixabisa i-euro zayo ezili-15 ngenyanga kwaye abo bangaphantsi kweminyaka engama-30 ubudala kuya kufuneka bahlawule ii-euro zabo ezi-2. Kukwakhona ukudibanisa, kodwa kuba sikwinkqubo yokudibana nomntu okhethekileyo, iTinder Gold yingcebiso yethu. Kwaye enyanisweni sisixhobo sethu esikhethiweyo ukudibana nabahlobo abatsha.
Meetic yeyona app ilungileyo ukudibana naloo mntu ubudlelwane obungapheliyo. Nangona kunjalo, okwangoku, siyinyani. Njengomhlobo wam osoloko efuna ubudlelwane obunje wathi: "Lixesha lokuba ndibeke iMeetic ukuba bendifuna ubudlelwane obunzulu kwaye i-95% yabafowunelwa bam iyanyamalala."
Njengokuba kuninzi okwenzekayo kubomi bokwenyani, kuninzi «ithengisa izithuthuthu». Kwaye yonke into iya kuba kukuzama ukuhlala nentombazana leyo kwaye siqhubeke nokuthengisa isithuthuthu de sifezekise iinjongo ezifunwa ngabaninzi nabaninzi. Ngayiphi na imeko, kuyinyani ukuba iqonga elifana noMeetic lenza ukuba umntu ofuna ukuzibophelela aziwe ngakumbi kunokuba «ngumhlobo obalekayo».
Kufuneka ikhankanywe ukuba I-Meetic ibijikeleze iminyaka emininzi ngakumbi kuneTinder, okoko iqale kwinguqulelo yedesktop, ngelixa yesibini isebenzise ii-smartphones kunye nokuba i-GPS inyulwe ngabaninzi ngeminyaka.
Umahluko omkhulu kukuba uza kuya ukwazi ukumakisha ukuba unomdla kubudlelwane obuzinikeleyo kwiprofayile yakho, ke uya kuyenza ngokukhawuleza icace into oyifunayo. Ngapha koko, xa umntu ekhangela abantu bokudibana nje, awusoze uphume uye kukhangela, ke kunokuba kulunge kakhulu kumntu onezinto ezicacileyo kwaye angafuni kuchitha ixesha.
Ukupasa intlawulo kaMeetic
Kuyinyani ukuba sinjalo Ukuthetha ngenkonzo yoqhakamshelwano ebiza kakhulu kuhlobo lwayo lweprimiyamu. Sithetha ngee-euro ezingama-34,99 ngenyanga ukuze ube neebhondi zeenyanga ezi-6 ukuze ube kwi-euro ezingama-12,99, kodwa oku akuthethi ukuba kuya kufuneka uhlawule ii-euro zakho ezingama-77,40 ngaxeshanye. Ewe, nabani na oxhoma naye, ngaphandle kokuba baneakhawunti enkulu yokutshekisha, uya kuhamba kangangoko kunokwenzeka; ngakumbi ukuthetha kwi-vertex yokufuna ukulalanisa.
Omnye we Imiba enomdla yeMeetic ziiprofayili zabo eziqinisekisiweyo. Kungabonakala kusisiyatha, kodwa siyaqinisekisa ukuba umntu esidibana naye unguye kanye. Ayizukuba sisihlandlo sokuqala ukuba uhlangane neeprofayili ezingezizo, ngakumbi kwezinye ii -apps ezisivumela ukuba "sidlale" simahla nalapho ezi profayile zifunyanwa, zihlala zingabantu abazibophelelayo abafuna into ekhawulezayo. .
I-Meetic yinkonzo efumana nzulu malunga neeprofayili ezingezizo, njengoko zihlala zikhokelela kwiingxaki. Ewe ubala kwinto yokuba ukuba ufuna ezona nkangeleko ziceliweyo, kuyakubiza ngaphezulu ukuba banomdla kwenye. Inyaniso yokufaka usetyenziso olunje ayithethi ukuba kukho ibha evulekileyo. Umntu kufuneka ayisebenzele, uthathe isithombe esihle kwaye ubeke into enomdla etsala umdla. Sijongene nendlela yedijithali apho kufuneka sibe nomdla kancinci ukubona ukuba sinobuntu. Ngalo lonke ixesha ngaphandle kokudlula kuthi kwaye ngenxa yoku, uMeetic, njengoTinder, banezixhobo zabo zokusinceda.
Meetic, ukuthandana app. Dibana nabantu nithethe
Enye yezonaapps zaziwayo kwaye inokuba yenye into kwezi zimbini zangaphambili kwaye zongeza ezona zinto zikhutshelweyo kwihlabathi liphela. I-LOVOO nayo idlala kunye nokuthanda okanye andiyithandi ukuze ndikwazi ukufumana imatshisi kwaye ndiqale incoko.
Enye ye Ezona ngxaki zinkulu zeLOVOO ziiprofayili ezingezizo, kuba kulula ukuzifumana kwaye ukuchitha ixesha ukuze umntu lowo anyamalale ngokukhawuleza. Kukho ingxaki yabantu abafuna ukunika isondo ngokutshintshiselana ngemali, ke kunokuba ngumsebenzi onzima ngakumbi ukufumana umntu ohambelana noko, nangona inyani kukuba ifumana amanqaku amahle.
Phakathi kwezinye izinto ezintsha ezinokuthelekiswa nendlela eyayiyiminyaka embalwa edlulileyo, olu setyenziso lokudlala ngothando olusuka kwiselfowuni luvumela ukusetyenziswa kwe Ingxoxo yevidiyo ebukhoma kwaye iyakudibanisa kwifowuni yevidiyo. Sele uyazi ukuba oku kukhokelela ekubeni ubonakale, ke ukuba uvukile kutshanje emva kokuba ulele, ungazi ngcono xa kufuneka ubeke ubuso.
Ukusuka kumrhumo ohlawulelweyo uyasivumela thumela imiyalezo kubantu abasebenzisa iakhawunti yasimahla, ke kusinika amandla amancinci ukuba siqale incoko ngokukhawuleza. Ukuba sineprofayili enomdla kwaye silungile ekuncokoleni, ngokuqinisekileyo ngeentsuku uya kuba nakho ukunxibelelana nabantu, nangona kufuneka uzinikele kancinane kuwo.
I-LOVOO isishiya inyanga nge-euro ezingama-7,99, ixabiso elincitshisiweyo ukuba siyalithelekisa nezinye iindlela ezinjengezi zikhankanyiweyo. Ukuba sihlawula i-LOVOO ngenyanga (singayenza unyaka wonke nge-euro ezingama-45), sinokufikelela kuthotho lweempawu ezinje:
Jonga ukuba ngubani otyelele iprofayile yethu
Thumela ii-icebreaker kwaye omnye umntu angahlawuli Ngokubhalisa ungangena kwingxoxo ngqo nathi; kwaye iluncedo xa isiza kuqala incoko kule app
Qalisa incoko nabasebenzisi abadumileyo; ezinye ukuba ukuba azikuthandi kuya kuba nzima ukuthetha nazo
Ukutyelela ezinye iiprofayili ngokungabonakaliyo
Ezi zezinye zeempawu ezinokuthi ahluke kakhulu kwezinye ii -apps, kodwa siza kuba rhoqo kule app yokuthandana, sihlala sikucebisa. Izibonelelo zihlala zininzi kakhulu, nangona kuyinyani ukuba kwi-app ye-LOVOO ukuba siyayisebenza, akukho mfuneko yokuba sihlawule nepeni ukuze sihlangane nabantu abanomdla.
I-LOVOO -Incoko yokuncokola, ukuhlangana nabantu kunye nokudlala ngothando
Umthuthukisi: I-LOVOO GmbH
Sijonge usetyenziso olwahlukileyo kolunye jolisa ngakumbi kwi-geolocation ukufumana abantu abasondeleyo. Oko kukuthi, iya kufumana abo basebenzisi bakufutshane kwaye baya kuba nakho ukukubonisa abo udibene nabo.
Singayichaza ngcono le app ukuba sizibeka kwimeko yokuba siza kuya ethekweni okanye kwikonsathi. Sazisa i-Happn, kwaye ngexesha lokwenyani liza kusixelela sonke abo bangaphantsi kweemitha ezingama-500. Oku kuneenzuzo kunye neengxaki. Enye umahluko wayo kukuba ungabetha abanye abasebenzisi, kodwa bona, de benze inyathelo elinye, ngekhe bazi ukuba "babethwe" nguwe.
Ewe kuyinyani oko Sijonge usetyenziso olunye oluhlawulelweyo, ukusukela oko ukwenza ezo crushes uzakufuna ikhredithi. Ngamanye amagama, kuba awunayo iprofayile elungileyo, uza kuba nexesha elinzima lokungena kwincoko nabanye.
Yisicelo esisebenzayo ayinabantu abaninzi njengezinye ii -apps, kodwa inokuba yenye indlela kwizixeko ezikhulu apho kunokubakho amathuba amaninzi. Njengoko kunokwenzeka nakwezinye iidolophu zehlabathi apho abantu babanika enye okanye enye idolophu.
Happyn - Iintlanganiso kunye nokuthandana
Enye yezonaapps zisetyenzisiweyo, kodwa loo nto yahlukile kwezinye ngeprofayile ebanzi onokuyenza kwiakhawunti yakho. Oko kukuthi, uya kuba nakho ukubeka zonke iintlobo zeenkcukacha ukuze ujonge ngakumbi kwizinto ozithandayo, ukuthanda izinto, umdla kunye nezo datha ngamanye amaxesha ezinokuba nomdla kuthi ngaphezu komzimba waloo mntu onokuba ngumhlobo omkhulu okanye umfazi yobomi bethu.
La Uluntu lwe-POF lutsala ngakumbi kwezi profayile zibanzi apho kuqatshelwe ukuba umntu unikezele imizuzu yakhe nokushiya ileta yakhe kwaye angabonisa imvelaphi anayo njengomntu. Kukwakho neeprofayili zemidaniso ekhawulezileyo njengezinye ii -apps, kodwa kuthatha ngaphezulu ukudibana nomntu.
Ikwanayo nenguqulo yayo ehlawulelweyo, nangona kungafuneki, ngomonde omncinci, ukuba ungadibana nabanye abantu. Njengale yokugqibela, sisixhobo esifanelekileyo kwisixeko esikhulu, kuba kukho inani elikhulu labasebenzisi abafuna unxibelelwano ngaphandle kwesangqa sabahlobo babo.
Enye enye esiyicebisayo kuba ayifuni nkcitho eninzi kubhaliso kwaye kuba ukujonga amadinga ngokuzibophelela kunokuba kufanelekile. Ewe kunjalo, curl iprofayile yakho ubuncinci ukuze babone ukuba unento eyodlula izihlunu okanye loo mlomo mhle.
Indawo yokuFumana yasimahla ye-POF
Umthuthukisi: Uninzi lweendaba ze-ULC
Es yeenkonzo zokuqala efike ngexesha elinye neMeetic. Ngelixa kunokuba sisibonelelo sokuba liqonga leengcali, njengoko "litshisiwe" kakhulu kwaye uninzi, luhlala luhleli ngasemva ukudibana naloo mntu ulungileyo.
Sithetha ngantoni Ngaphambi kokukhanya kwee-smartphones kwakusele kukho iBadoo Sele iqinisekile kakhulu ukuba unokuba nomlingane ongene kwiwebhu ngexesha apho ukuthandana kwi-Intanethi bekungekho mkhwa njengokuba kunjalo ngoku. Ayithethi ukuba inomtsalane wayo, nangona bekutshiwo usetyenziso oluthe lwasetyenziswa ngokubanzi kwaye uninzi lwaye lubeka ecaleni ngaphambi kwezinye zezi mini kunye nezintsha ezifana neTinder.
Ewe sisicelo esiphantse sinyanzele ukuba usebenzise ikhadi ukutshintshela kwimodeli yobhaliso kwaye Sebenzisa isicwangciso sokurhweba xa usazi, uyeka ukuyisebenzisa. Okwangoku, ngamanye amaxesha kunokuba yinkqubo oyisebenzisayo, ngakumbi kunxibelelwano olungenanjongo kwaye apho kungekho nto ifunekayo komnye umntu; Ngamanye amagama, amaxesha nje.
Unenethiwekhi enkulu yabafowunelwa, kodwa abaninzi bashiya i-app ngelo xesha kwaye ungangeni. Akukho kubi kuvavanyo, kodwa sahlala apho.
Badoo -Isixhobo sokuthandana sokudlala ngothando kunye nokuthandana
Sidlule ngaphambili usetyenziso olunikezelwe kunxibelelwano lwabafana abangamakhwenkwe kunye nabafana. Ukuba kukho into elungileyo kweziapps siya kuba nakho ukufumana naluphi na uhlobo lomntu olunxulumene nezinto esizithandayo, umdla wethu okanye iifollies. Kwaye kulapho usetyenziso olunjengoGrindr lungena ukuze ujonge loo mntu owenza ubomi bakho bonwabe. Ngokusengqiqweni, ukuba izinikele ekwazini amakhwenkwe, kuya kuba lula kuthi kunala maxesha mabini adlulileyo; Nangona oko akuthethi ukuba kwiTinder sinokuphinda sidibane namakhwenkwe okanye amantombazana abheja kwabo besini esifanayo.
I-Grindr ibonakaliswa yiminye imiba apho ukuthandana kweapps kuyachukumisa kwiselfowuni ye-Android. Apha unokujonga ukuya kuthi ga kuma-600 abantwana kwigridi enye, jonga iiprofayili ezichazwe ngakumbi kunye neefoto ezinkulu kwaye ungancokola udlula iifoto ezisondeleyo ukuba yile nto siyenzayo.
Sele siyayazi loo nto ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni kungaphezulu kwefashoni Kwaye eziapps zisebenzisa ukuba zikwazi ukugcina ubudlelwane obungenazinto zinzima ngexesha elinye; Yonke into emva kokuba neshedyuli epheleleyo kunye neveki ngaphezulu kokuxinana ukonwabela zonke iintlobo zobudlelwane.
NjengoTinder, uGrindr naye une ukhetho lokunika inkwenkwezi kuloo nkwenkwe uyithandayo esiyithandayo ngenxa yeendevu zakhe okanye ngenxa yendlela yokunxiba ehamba nesitayile sethu.
UGrindr kunye neXTRA yakhe
Ukuba sele sifuna ukungena kwi-Grindr app, iyasivumela ukuba sihlawule inyanga nenyanga kolu luhlu lweempawu ezinjengokupheliswa kwentengiso, yabona ukuya kuthi ga kuma-6 amancinci, jonga abo banxibeleleneyo, kuphela abo banesithombe kwiprofayili, izitshixo kunye nezinto ozithandayo ezingenamda kwaye basebenzise amabinzana agciniweyo ukukhawulezisa incoko kwaye singakhawuleza ukuba nobhiya ebusweni.
Olunye uhlelo lokusebenza olukhulu lokuthandana, kodwa yintoni ihlala kubaphulaphuli abangamadoda kwaye kwisixeko esikhulu ngokuqinisekileyo uya kuba nepati okwexeshana.
I-Grindr-Ingxoxo yamaGay kunye nokuDibana
Umthuthukisi: I-Grindr LLC
Uluhlu olukhulu lwe ezona zinto zilungileyo zokuthandana kunye nazo zonke ezishiyekileyo ngeTinder. Yeyona ndawo intsha, yeyangoku kwaye iqonga layo lisebenza kakuhle kakhulu ukudibana nabantu abanomdla kakhulu. Ke ngoku uyazi, ukutsala ikhadi kwaye usebenzise ukudibanisa kwakho, nangona ungalibali abanye njengoko besitshilo. Siza kuza okwesibini ngeLOVOO.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » IiApple zeApple » Ezona 7 zintle zokusebenza ukuthandana kwi Android
Rekhoda ezigqwesileyo ze-Android
Uyifaka njani i-Android kwiPC yakho